बीएण्डसीमा सुरु भयो चिरफारविना टाउकोको शल्यक्रिया सेवा | Nepali Health
बीएण्डसीमा सुरु भयो चिरफारविना टाउकोको शल्यक्रिया सेवा
२०७८ असोज २० गते ९:३० मा प्रकाशित
झापा, २० असोज । बिर्तामोडस्थित वीएण्डसी टिचिङ हस्पिटलमा बीना चिरफार टाउकोको शल्यक्रिया उपचार सेवा सुरु भएको छ । इन्टरभेसनल न्युरो सर्जरी भनिने सो विधिबाट टाउकोमा रहेका रगतको नसा फुट्ने (ब्रेन एन्युरिजम)। पक्षघात जस्ता नसा सम्वन्धी समस्याको सहज ढंगले उपचार हुने बताइएको छ ।
टाउकोमा रहेका रगतको नशा फुट्ने (ब्रेन एन्यूरिजम), पक्षघात, मस्तिष्कघातजस्ता नशासम्बन्धी रोगका लागि बिना चिरफारको अप्रेसन बिएन्डसी हस्पिटलमा सम्भव भएकाले नयाँ आयाम थपिएको डा. ताम्राकारको दाबी छ ।
उनले काठमाडौँबाहेक पूर्वाञ्चलको बिर्तामोडमा मात्र यो उपचार रहेको पनि दाबी गरिन् ।
नशा फुटेर आउने समस्याजस्ता घटना भएको ४ घण्टाभित्र हस्पिटल ल्याउन सके उपचार सहज हुने उनले बताईन । तर, ठुलो समस्या भएपछि र समय बितेपछि मात्र बिरामी उपचारका लागि हस्पिटल आउने गरेको उनको अनुभव छ ।
रक्तनलीमा उच्च रक्तचापका कारण बेलुनजस्तो फुल्ने र जतिखेरै पनि फुट्ने सम्भावना अधिक भएकाले पनि यसको समयमै परीक्षण गराउन उनको सुझाव छ । यस्तो समस्या हरेक ५० जनामध्ये १ जनामा रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरिन् ।
पक्षघात भएका बिरामीलाई समयमै हस्पिटल ल्याएको खण्डमा अप्रेसन नगरी औषधिको प्रयोगबाट पनि निको पार्न सकिने चिकित्सकले बताएका छन् । समयमै ल्याए कुनै अंगभंग नहुने, साधारण व्यक्तिजस्तै बिरामीले हिँडडुल गर्ने र बोल्न सक्ने औषधिकै प्रयोगबाट हुने बताइएको छ ।
बीएण्डसीमा हालसम्म १०७ जनाको एन्जिओग्राफीको माध्यमबाट परीक्षण गरिएको र जसमध्ये १२ जनाको बिना चिरफार सफल अप्रेसन गरिएको पनि डा. ताम्राकारले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले न्यूरो सर्जरीको सवालमा अमेरिका र युरोपमा हुने गुणस्तरीय सेवा बीएण्डसीमा सम्भव भएको बताए । उनले अबको योजना बीएण्डसीमै मुटु, फोक्सो र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने रहेको पनि सुनाए ।
यसैबीच, दसैँको समयमा पनि अन्य समयमा जस्तै बीएण्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलको ओपीडी सेवा सञ्चालन हुने हस्पिटलका सूचना अधिकारी प्रमिश गिरीले जानकारी दिएका छन् ।